Amanzi yisidingo esiyisisekelo sempilo kanti avela ezibusisweni ezingapheli zika—Allah Ta'ala. Kusemseni woMenzi noMdali wethu ukuthi abusise uluntu ngale ni'mat (umvuzo) enkulukazi yamanzi, futhi uluntu olungasoze lwaphila ngaphandle kwayo.
Ngokweqiniso, akusilona kuphela uluntu oluthembele kuyo, kodwa yonke into ephilayo ithembele ngqo kuyo ukuze iphuile. I-Qur'aan eNgcwele ikubeka kucace kwiSurah An Nur ukuthi u-Allah Ta'ala udale yonke into ephilayo ngamanzi.
Ngokujwayelekile abantu abahlala lapho kutholakala khona amanzi, njengaseduze kwamadamu, imifula, amachibi ngisho nemifudlana. Amadolobha amakhulu namaancane, izigodi kanjalo nezabelo konke kwakwakhiwa lapho amanzi ayetholakala kalula khona. I-Makkah iyisibonelo esihle salokhu- umhlaba owugwadule ongenamklhiqizo, ungakulungele nokuhlala abantu unjalo, isimo sokoma nogwadule, kepha amanzi e-Zam Zam aphendula lendawo yaba yindawo ehanjelwa kunazo zonke emhlabeni ngokokholo. Kuyamangaza futhi ukubona ukuthi amaMuslim, umhlaba wonke umthombo athatha i-Zam Zam (ukuze agoduke nayo) kuyo kanye lendawo eyayingenalutho phambilini.
Ososayensi bayavumelana ngephuzu lokuthi noma kuphi lapho kutholakala khona amanzi - ngisho nakweminye imihlaba esemkhathini-kunethemba lokuthi umuntu angaphila kulowomhlaba.
Ubungako bamanzi atholakala emhlabeni buyamangalisa. Nokwekhulu ekhulwini, ungama 75% womhlaba uzungezwe ngamanzi olwandle. Ukuthasisela kulokho, umhlaba owomile unezikhwama zamanzi ezisesimweni samadamu, imifula, amachibi kanye nemihosha. Izintaba ezembethe iqhwa, nezinguzanguza zeqhwa ezihambayo kanye nenqwaba yeqhwa eyakhela emhlabeni ngokweqiniso konke lokhu kungamanzi. Amafu alenga ngaphezu kwethu kanye nomswakamo osesimweni samazolo kanye nenkungu kinke lokhu kuthathwa njengamanzi. Ngakho-ke, noma kuphi lapho sibuka khona, sithola ukuthi sizungezwe ngamanzi.
Njengabantu, ama 70% emizimba yethu kwakhiwe ngamanzi kanjalo nalomoya esiwuphefumulayo nawo futhi unamanenjana amancane amanzi. Nokwakheka komzimba kwenziwe ngengxubevange yezintwana ezahlukene kanye nezicubu ezimqoka, kuzona amanzi adlala enkulu indima noma ebaluleke kakhulu ekunyakazeni kwalezizinto ezibaliwe. Igazi ligijima umzimba wonkana, kodwa namanzi abaluleke kakhulu ekondlekeni kwalo. Noma yisiphi isilokazana kanye nesilwane kunezinga lamanzi emizimbeni yako, kanti kwezinye lelizinga lamanzi liba ngaphezulu kwama 75%. Nezilwane zasemhlabeni ukuphila kwazo kulele wokufa uma umzimba uthola amanzi anele. Ngakho-ke umthombo wamanzi ngokudingeka uyisango layoyonke into ephilayo kulomhlaba.